I-Saga iyonke yeMfazwe: Iitrone zaseBritannia umdlalo weqhinga elihle | Ubunlog
Iyonke iMfazwe yeSaga: Iitrone zaseBritannia ngumdlalo omkhulu ovela kwimpumelelo enkulu yeMfazwe iyonke, Esi sihloko sine-sagas ezininzi esele sifumene igama elihle kakhulu kunye nokwamkelwa luluntu lweGamer. Esi sitolimende sakhutshwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye inenkxaso yokufakwa kwiLinux.
Ngaphambi kokuba uqhubeke kubalulekile ukuba ndibakhankanye ukuba lo mdlalo ngaphandle kokuba unenguqulo yeLinux ayithethi ukuba isimahla, kuba uninzi lunoluvo olubi, Esi sihloko sinokuthengwa ngenani elincinci kwi-Steam.
Iyonke iMfazwe eyiSaga: Iitrone zeBritannia ngumdlalo weqhinga osetelwe kwiziqithi zeBreton ngo-878 AD, apho amazwe ase-Great Britain kunye neeViking ahlala umzabalazo woloyiso kunye nobukhulu.
Iitrone zaseBritannia sisiqalo sokuqala kuthotho lwemidlalo ezizimeleyo ekhuthazwe kukuchazwa kwimbali.
1 Malunga neTrone yaseBritannia saga yeLinux
2 Imowudi yomdlalo
2.1 Ubuncinci beemfuno
2.2 Izidingo eziCetywayo
3 Uyifumana njani itrone yeBritannia?
Malunga neTrone yaseBritannia saga yeLinux
Yaqala yakhutshwa kwiqonga leWindows kunye neMacOS. Ngoku enkosi kuSteam esi sihloko sifikelela kwinkqubo yokusebenza yeLinux.
Umdlalo ifaka iphulo elikhulu elinikezela abadlali ukhetho lweendlela ezininzi kwimpumelelo yabo ezukileyo ekwakheni ikamva leBritish Isles.
Iza nenye yeemephu zeMfazwe zizonke ezenziweyo, ukuze uhlolisise kwaye unqobe iBritish Isles.
Ngo-878 AD, uKumkani waseNgilani (uAlfred Omkhulu) wakhusela kakhulu kwi-Battle of Edington, kwaye wagxeka ukuhlasela kweVikings. Ekohlwaywa, kodwa esazimisele, abaphathi bemfazwe baseNordic bahlala eBritane. Ngethuba lokuqala phantse kwiminyaka engama-80, uxolo kulo mhlaba luyasongelwa.
Iikumkani zaseNgilani, eScotland, eIreland naseWales zivakalelwa kukufika kwexesha elitsha kwesi siqithi sasebukhosini. Lixesha lezivumelwano kunye neemfazwe, apho ithamsanqa litshintsha amacala kunye neentsomi, kwisaga ebonisa ukunyuka kwelinye lawona mazwe makhulu kwimbali.
Ukudibanisa iimfazwe ezinkulu zexesha lokwenyani kunye nesicwangciso esisekwe ekujikeni, Iitrone zaseBritannia zicela umngeni kubadlali ukuba bakhe kwaye bakhusele ubukumkani, bayalela elinye lamaqela kwanokudibana neminye imikhosi, ukuchaza ikhondo lembali.
Ukufika Iinjongo zabo abadlali kuya kufuneka benze umanyano, balawule iindawo zokuhlala, benze imikhosi kwaye baqale iphulo lokoyisa ukusuka kumazantsi eGaelic Scotland, ukuya ezintabeni, ukuya kumasimi aluhlaza eAnglo-Saxon Kent.
Inkqubo yozakuzo Isekwe ikakhulu kwezopolitiko zangaphakathi zobukumkani, inesidingo sokucwangcisa imitshato, ukugcina umthi womnombo kunye nokuqwalaselwa kwiimfuno zerhuluneli, iinjengele kunye nezinye iinkokheli, kuba ukunikela ingqalelo encinci, okanye ukuguqula isikali kakhulu kwicala elinye, kungaphelela ekungcatshweni nasekuvukeleni.
Ke, idiplomacy yelinye ilizwe ayinantlukwano kweminye imidlalo yevidiyo edlulileyo kolu thotho.
Ukongeza, iitrone zaseBritannia ziza nohlaziyo olungenakubalwa kwiMfazwe iyonke ethembisa ukucebisa ngamava akho eSaga, kubandakanya amaphondo, iingxaki, ukuqesha, ezopolitiko, itekhnoloji kunye nokunye.
Phakathi kweemfuno ekufuneka zenziwe yiPC yethu ukuze sikwazi ukuqhuba esi sihloko kufuneka sibe ne-Ubuntu 18.04 LTS (iBionic Beaver) kwaye ubuncinci iprosesa ye-Intel Core i3-2100 okanye iprosesa ye-AMD FX-6300 ene-8 GB ye-RAM, 15 GB ye indawo yediski yasimahla kunye ne-AMD R9 2GB 285 GPU okanye iNvidia 680 2GB okanye ngcono.
Ngamava okudlala, i-Intel Core i7 3770 okanye iprosesa ye-AMD Ryzen 7 iyacetyiswa, kunye ne-480GB AMD RX 4 okanye i-970GB okanye ikhadi levidiyo leNvidia GeForce GTX 4 elingcono.
Uyifumana njani itrone yeBritannia?
Njengoko sele kukhankanyiwe, esi sihloko sinokuthengwa ngokuhlawulela ikopi yakho ngeSteam, ikhonkco oku kulandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » I-Saga iyonke yeMfazwe: Iitrone zaseBritannia ngumdlalo weqhinga elihle